Chautari Daily » सामाजिक सञ्जालमा आस्था राउत
सामाजिक सञ्जालमा आस्था राउत
काठमाडौं / विमान स्थलमा महिला प्रहरी जवान सँग भनमभन भएपछि फेसबुक लाइभ मार्फत कडा अभिव्यक्ति दिएकी गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले सोमबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरी हिरासतमा रहेकी गायिका आस्था राउतलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले ४ हजार रुपैयाँ धरौटीमा मंगलबार दिउँसो रिहा गरेको छ।
गायिक राउतको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल :
र यस्तो लाग्दैछ, निर्मला पन्त नेपाल प्रहरिमा कार्यरत कसैको छोरी हुन्थिन भने अपराधी पत्ता लागि सक्थ्यो र कार्वाही पनि भइसक्थ्यो। हो आस्था राउत ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेकै हुन, जुन कुरा उनले स्वीकार पनि गरेकी छन ।
तर, बोलेकै भरमा उनिमाथी जुन प्रकारको क्रियाकलाप प्रहरी प्रशासन बाट भइरहेको छ त्यो अनावश्यक छ सजाय हुनुपर्छ तर यति धेरै होइन चार चार दिन हिरासतमा के का लागि? । र फेरि भन्छु आस्था ले गल्ती गरेकै हो तर प्रहरी प्रशासन यति धेरै तात्तिनु र आत्तिनु पर्ने होइन। मेरो चाहाना यत्ती हो कि प्रहरी संगठन प्रती जन बिश्वास नघटोस नटुटोस।
– गायक बद्री पंगेनी
आस्था राउतलाई थुनेर प्रहरीले अधिकार दुरुपयोग गर्‍यो
– सांसद कोमल ओली
हो आस्थाले बोल्ने क्रममा गल्ती गरेकी छ्न तर माफी मागेर आफै प्रहरी समक्ष हाजिर हुन जादा प्रतिशोधमा आस्थालाइ हिरासतमा लिनु के यो जायज छ त ?
– गायिका मञ्जु पौडेल
आस्था रावत प्रहरी हिरासतमा रहेको र उनले प्रयोग गरेका अभिब्यक्ती बारे सबैजसो लाई थाहा छ । उनकै शब्दमा समग्र प्रहरी संगठन प्रती पर्न गएको अमर्यादा बारे भुल स्विकार पनि गरेकी छन । यस बाहेक आस्था एक नागरिक पनि हुन र उनले सेवा प्रबाहमा गरिने व्यबहार बारे सुधारको लागि आक्रोसित भएको देखिन्छ । ब्यक्ती नागरिक र पदाधिकारी जो भएपनी मानविय व्यबहार र असुन्तुष्टी पोख्ने ठाउँ नै यस्तै सार्वजनिक स्थलहरु हुने गर्दछ ।
यसलाई ठुलो बिषय र संस्था प्रतिको आक्रमण नठनी एउटा सेवाग्राहिको जान अन्जान आक्रोसको रुपमा लिएर यथासिघ्र हिरासत मुक्त गर्नु पर्दछ । यस बाट हामी सबैले सकारात्मक पाठ सिक्नु पर्छ र सुधार हुने अबसर ठान्नु पर्छ । आस्थाले नियोजित अपराध होइन भुल/आक्रोसमा अपशब्द बोलेको रुपमा लिनु पर्छ । यस्ता घटना धेरैका वास्तविक जीवनमा घटेका हुन्छन र कैयन सार्वजनिक हुँदैनन । सिक्दै जाने क्रममा समाज पनि सुधार हुँदै जाने भएकोले यसलाई कानुनी र प्रशासनिक बिषय मात्रै बनाउनु हुँदैन ।
– नायिका रेखा थापा
गायिका आस्था र कानुन प्रती को निष्ठा
अभद्र व्यवहारको आरोप खेपिरहेकी गायिका आस्था राउत यतिखेर प्रहरीको हिरासतमा छिन् । केहीसमय अघि विमानस्थलमा चेकजाँच गर्न बसेकी महिला प्रहरीसँग भएको सामान्य विवादमा फेसबुक लाइभ आएर प्रहरीको चेकजाँच गर्ने प्रकृया माथि औंला उठाएकी आस्थालाई चेकजाँच गरेकी प्रहरीले उनीविरुद्ध उजुरी दिए पस्चात अहिले उनलाई प्रहरी प्रती अभद्र ब्यवहार गरेको आरोपमा सोधखोज गर्न हिरासत लगिएको हो । यो बिषयले यतिखेर सामाजिक संजालमा एउटा नयाँ बहसको उठान गरेको छ । म यस्लाई सामाजिक बहसको रुपमा लिन चाहन्छु । किनकी आस्था राउत जस्ता धेरै ब्यक्तिहरुले सुरक्षाकर्मीहरुको ब्यवहार प्रती बारम्बार औंला उठाउने र गुनासो गर्ने गरेको समाचार विगतमा पनि देख्न र पढ्न पाइएको छ । अहिले, चर्चित गायिकासंग जोडीएको भएर यो मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हो भन्दा अयुक्ती नहोला किनकी आमजनताको गुनासोले यस्तो स्पेस पाउन मुस्किल छ ।
यसो भन्दैमा मैले यहाँ आस्था राउत को पक्षमा या सुरक्षाकर्मिको बिपक्षमा बोल्न खोजेको भनी पक्कै होइन । म यो मुद्दालाई सामाजिक मुद्दाको रुपमा उठोस्, बहस होस् र त्यही अनुसारको निर्क्यौल पनि निस्कियोस् भन्ने पक्षमा छु ताकी भोलिका दिनमा यस्ता घटनाहरु नदोहरिउन् ।
यतिखेर हामी नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को संघारबाट एक कदम भित्र प्रवेश गरेका मात्र छौं । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटननै भ्रमण बर्ष २०२० को मुल स्रोत तथा आधार हो । बाह्य पर्यटनको मुल प्रबेशद्वार त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थालनै हो तत् पस्चात् का सहायक द्वार भनेको घरेलु बिमानस्थलहरुनै हुन ।
म पनि धेरै यात्राा गर्न रुचाउने गर्छु । यि यात्राका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थलहरु पुग्ने गर्छु । यतिबेला म आफ्नै बिमानस्थल र अन्य देशका बिमानस्थलमा हामी प्रती हुने ब्यवहारहरुमा केही भिन्नता पाउँछु । दु:खका साथ भन्नु पर्छ, हाम्रो बिमानस्थलहरुमा हुने ब्यवहारहरु कहिले काहीं पचाउन गार्‍है हुन्छ । त्यही अपच ब्यवहारहरुले आक्रोसित तुल्याउनु सामान्य प्रकृयानै हो । यही प्रकृयाको उपझनै हो ,आस्था काण्ड ।
सिसी क्यामेराको भिडियो फुटेजमा आस्था र सुरक्षाकर्मी बिचको नोंकझोक देखियो तर सुनिएन । रुखो, तितो र रुस्ट बोलिले द्वन्द निम्त्याउँछ । आवाज नभएको भिडियोले दुई बिचको संवाद सुनिएन त्यसैले भिडियोको आधारमा भन्नु पर्दा म दोश कुनै एक को मात्रै देख्दिनँ । हो, लाइभमा आएर सुरक्षाकर्मी बिरुद्द बोल्नु चाँही आस्थाको गल्ती हो । जस्लाई आस्थाले पनि पछील्लो प्रतिकृयाहरु मार्फत स्विकारेकी छिन् ।
अत: आस्थाको पनि दोष देखाई रहँदा म भन्न चाहन्छु कि आस्थाले यत्ती ठुलो गल्ती गरेकी पनि छैनन् जस्लाई कठघरामै उभ्याउन परोस् अनी हिरासातमै राखेर केरकार गर्न परोस् । मुस्कान सहितको सेवा दिने प्रतिवद्दता देखाएका सुरक्षाकर्मीहरुको मुहारमा मुस्कान नभेटिंदै गर्दा अन्य नागरिकको अनुहारमा हाँसो खोज्नु कत्तिको जायज होला ?
सुरक्षाकर्मी देख्नासाथ हामीभित्र सम्मानको भाव जाग्नु पर्ने हो, डर लाग्नु पर्ने होइन । तर अहिलेको अवस्था ‘डरलाग्दो’ छ । कानुन तर्साउनको लागि हुनु हुँदैन आत्मसाथ गर्नको लागि हुनु पर्छ । गल्तीको आकार हुन्छ र परीमाण हुन्छ अनी कानुनमा त्यही अनुसारको सँजाय पनि तोकिएको छ । तर, आस्थालाई अहिले जुन किसिमको कानुनी कार्वाही गरिंदैछ त्यो अचाक्ली गरिंदैछ । उनी कुनै फौजदारी अभोयोग या कुनै ज्यान मुद्दा वा चोरि तस्करीको अभियोग लागेकी ब्यक्ती होइनन् । सबैले देख्नेगरी र सुन्ने गरी सामान्य गल्ती गरेकी एक लोकप्रिय नेपाली कलाकार हुन । यिनले गरेको गल्तिको आकार र परीमाण बारे हामी सबैले आँकलन गर्न सक्छौं तर बिडम्बना यिनलाई चाहिने भन्दा बढी बिछिप्त बनाइने कोशीस भईरहेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
म मेरा यिनै शब्दहरु मार्फत अब साधारण नसिहतका साथ आस्थालाई सिघ्र रिहाको लागि अपिल गर्दछु । ब्यक्तीमा सुधार ल्याउनका निमित्त सँजाय तोकिने हो- त्यही सँजायले कुनै ब्यक्तिको मानसिकतामा बिक्रिडन पैदा गरायो भने त्यस्को कुनै महत्वहुँदैन । अपराधलाई बढावा दिने संजाय होइन- अपराधलाई घटाऊने खालको कानुन, नियम र सँजाय हुनु पर्छ ।
अन्तमा : चाहे सुरक्षाकर्मी हुन या हामी जस्ता आमा नागरिक, हामी सबैको मुहारमा मुस्कान नै सुहाउँछ । मुस्कान सहितको सालीन ब्यवहारले मात्र भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले आस्थालाई गल्ती नदोर्‍ह्याउने बाचा गरेर अहिलेको कार्वाहीबाट मुक्ती दिईनु पर्छ भने सुरक्षाकर्मिहरुलाई पनि ‘आम नागरिकसंग सालीन ब्यवहार गर्नु पर्छ’ भन्ने कडा निर्देसन सहित ड्युटीमा खटाउनु पर्छ ।
– नायिका – श्वेता खड्का
प्रकाशित मिति १४ माघ २०७६, मंगलवार १०:३५